एकमुखे रुद्राक्षको के महत्व छ? किन बन्यो दुर्लभ र बहुमुल्य? – Sadhaiko Khabar
एकमुखे रुद्राक्षको के महत्व छ? किन बन्यो दुर्लभ र बहुमुल्य?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २९, २०७७ समय: ५:३५:५४
भाग्यमानी हुन्छन ति मान्छे जसलाई एक मुखी रुद्राक्षको दर्शन हुन्छ – जान्नुहोस् यसको चमत्कार रुद्राक्षको नाम र त्यसको उपयोग एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा।